Marroo Dirribaa: 'Akkuma barame maqaa balleessuuf malee barattoota ugguruu keessaa harka hin qabnu' - BBC News Afaan Oromoo
Lixa Oromiyaa keessattii Godinaalee afran Wallagaa keessatti tajaajilli intarneettii, akkasumas bakkeewwan tookko tokkootti ammoo tajaajilli bilbilaa adda cituu ilaalchisee jiraattoonni yaaddoo keessa jiraachuu BBC gabaasuun isaa ni yaadatama.
Adda cituu intarneetii fi tajaajila bilbila irratti gama dhaabbata teeleekomunikeeshiiniin deebii argachuun hin danda'amne.
Haata'u malee, qondaalli motummaa Oromiyaa BBC'n dubbise godinaalee kanneenitti hojii nageenya uummataa bakkatti deebiisuufi nageenya mirkaneessuu kanuma kanaan duraatu hojjetamaa jira jechuun ala wanti haalicharratti gadi fageenyaan himame hin jiru.
Gama waraana 'WBO' bosonatti hafeen ammoo haalli gooda sana jiru maal akka fakkaatu ilaalchisee Marroo (Kumsaa) Dirribaa Ajajaa waraana WBO Lixa Oromiyaa.
"Motummaan akka yaadetti yeroo gabaabduu keessatti WBO irratti ol aantummaa argachuuf kan yaade waan galma hin geenyeef amma tooftaa biraan itti deemamaa jira," jechuun waraana mootummaafi miseensota isaa gidduutti waraanni gaggeeffamaa akka jiru hima Marroo Dirribaan.
Maatiifi firoonni wal arguufillee rakkoo guddaa taheera jedhu jiraattoonni BBC'n dubbise. Haatahu malee, Marroo ammoo bilbiluumaan argachuu dandeenyee.
Marroo akkamiin hojjechuu danda'e? Gaaffii BBC irra deebiin dhiyeesseef ture.
"Mootummaan yoo barbaade waggaa tokkoofiyyuu haa cufu. Waraanni keenya qunnamtii guyyaa guyyaa karaa guutuu taheen raawwataa jira.
Kisaaraan isaa mootummaaf malee qunnamtii waraana keenyaa irratti dhiibbaa tokkollee hin qabuu," jechuun tajaajila bilbilaa gutuu akka argataa jiran hima.
Image copyright MARSAALEE HAWAASAA IRRAA
Miidiyaa hawaasaarratti Marroon Maqalee jira oduun jedhu torban darbe keessa bal'inaan qoodamaa ture. Kana ilaalchisuunis BBC'n dhuguma TPLF waliin hariiroo qabduu jedhee gaafateera.
"Akkuma kanaan dura Koloneel Gammachuu Ayyaanaafi Jaal Daawud Ibsaa dubbataa turan bilisummaa Oromoo irratti qaama nu tumsu hunda waliin hojjechuu dandeenya.
Kun mirga keenyadha. Maaliif seexana hin tahiin, Oromoo bilisoomsuu danda'a taanaan waliin hojjechuu dandeenya,'' jedha Marroon.
Haata'u malee, dhimma TPLF ilaaluun, "Godaannisa bara dheeraa waan qabnuuf gonkumaa TPLF waliin hojjachuu hin dandeenyu," jedheera.
Sababii isaa wayita tarreessuus, godaannisa bara dheeraa kan akka gudeedamuu shammarran keenyaa, miillaafi harka dhabuu qabsaa'otaa akkasumas jaalleewwan qabsoo du'aniifi jiraataniifi du'aniin isaanii hin bekamne isaan biraa qabna.
Kanatu akka ilmaan Tigiraay waliin hin hojjenne nu dhorka jechuun, ''Ani kaniin jiru bunaafi bosona Oromiyaa keessa,'' jechuun deebise Marroon.
"Ibidda isa dhumaa dhaamsuuf taanaan waliin haasa'uuf qophiidha," Marroo
Nutis gocha kana waraana keessantu raawwatee laata? jechuun gaaffii Marroof dhiyeessineerra. Innis ''kaayyoon keenya barattoota waliin wal hin qabatu. Barattoota irrattis gocha jedhame kana hin raawwannu.''
''Oduun kun akkuma dur barame maqaa waraana keenyaa balleessuuf yoo tahe malee tasumaa gochaa kana keessaa harka hin qabnu. Waraana Bilisummaa Oromoo bakka bu'een dubbachaa jira,'' jedhe.
Naannoo jedhame sanatti garuu qaama hidhate hedduun jiraachu kan dubbatuun Marroon, baay'een isaanii kan daldala kontirobaandii irratti bobba'an ta'u hima.
Ilka arbaafi hanqaaquu guchii fa'a naannoo daangaa Oromiyaafi Gambeellaa akkasumas Sudaan irratti akka daldalamu himuun waraanni keenya naannoo sanayyuu hin jiru jedhe.
Ammayyuu bilisummaan Oromoo dhufeera jennee hin amannu kan jedhu Marroon, araara kanaan dura jedhamee akka booji'uutti malee akaataa barbaadameen miti jedhee komata.